सुनको सिक्रिले गोली छेकेपछि……. | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तपस्वी बम्जन सहित चारजनालाई पक्राउ पुर्जी
इटाली र स्पेन : युरो कसको हातमा? →
सुनका गहनाका कारण हामीकहाँ कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । कतिपय महिलाले सुनका गहना लगाएकै कारण लुटेराहरुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कतिपय घाइते हुनुपरेको छ । अर्थात् हामीकहाँ यो पहेँलो धातु सुन ज्यानमारा बनिरहेको छ । तर रुसमा भने सुनको सिक्रि लगाएकै कारण एक व्यक्तिको ज्यान बँचेको छ ।
सुनको सिक्रि बेचेर सो पैसाले रोगको उपचार गरी ज्यान बचाएका होलान् भन्ने तपाइँको अनुमान हुनसक्छ । तर त्यसो होइन । रुसको क्रासनोयास्क सहरका ती व्यापारीले लगाएको सुनको सिक्रिले लुटेराको गोली नै छेकेपछि उनको ज्यान बँचेको हो । संयोगवस उनले लगाएको बडेमाको मोटो सुनको सिक्रिमा लुटेराले चलाएको गोली ठक्कर खायो र उक्त गोली ती व्यापारीको सरीरमा पस्न पाएन ।
पुलिस अधिकारीहरुका अनुसार ती व्यवसायीमाथि आफ्नै घरको पहिलो तलामा आक्रमण भएको थियो । घरको सिँढी उक्लिँदै गर्दा एक्कासी बन्दुकधारीले उनीमाथि आक्रमण गर्यो । काँटीमा ताकेर हानेको पहिलो गोली उनको सिक्रिमा ठक्कर खाएर फर्कियो । दोश्रो गोली भने उनको छातिमा लाग्यो ।
धन्य ती व्यापारी घाइते हुनुका बाबजुत ती बन्दुकधारीमाथि जाइ लागे । अन्ततः घरका अरु सदस्य तथा छिमेकीको सहयोगमा त्यो लुटेरा बन्दुकधारी पक्राउ पर्यो ।